Home Wararka Al Shabaab oo dil toogasho ah ku fulisay shaqsi lagu eedeeyay danbiyo...
Al Shabaab oo dil toogasho ah ku fulisay shaqsi lagu eedeeyay danbiyo culus
Maanta ayaa Al-Shabaab meel fagaare ah ku toogatay nin ay ku eedeysay dabiyo culus oo ay ku jiraan in uu aflagaadeeyay Nabi Muxamed [NNKH], sidda ay daabacdey warbaahinta ku hadasha afka maleyshiyadda. Sida lagu daabacay warbaahinta Al Shabaab, Xasan Tooxow Fiidow oo loo garan og-yahay Luglug ayaa d waxaa xukunka dilka toogasho ah lagula fuliyey fagaaraha Al-Ansaar ee deegaanka Xiindheere ee gobolka Mudug.
Dhanka kale, Fiidow ayaa maxkamadda Al Shabaab waxa ay ku riday xukun dil ah. Xasan Luglug aha 87-sano jir, sida ay sheegeen xubno ka tirsan qoyskiisa, waxaa soo eedeeyay laba qof oo dadka degaanka ah “kuwaasoo kalkii dambe soo kaxeystay marqaatiyeyaal”.
Talabaada ay qaadeen Al Shabaan ayaa soo shaac baxaday iyadda oo gobolka Mudug ay muddooyinkii dambe ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ay waddaan ciidamada Soomaaliya kuwaasoo ka dhan ah dagaalameyaasha Al-Shabaab.
Howlgaladaas oo ay iska kaashanayaan ciidamada Galmudug, kuwa xoogga dalka iyo saaxiibada caalamiga ah ee Mareykanka ayay ku xoreeyeen degaano badan, ku burburiyeen saldhigyo kuna dileen xubno. Sida uu sheegay taliska milatariga Soomaaliya, in ka badan 200 dagaalame Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgaladan dhacay saddexdii asbuuc ee lasoo dhaafay. Balse, Al Shabaab wali kama hadlin sheegashadaas.